Funda indlela yokuvakalisa iNcwadi 'C' ngesiFrentshi?
'IsiC' sichazwa njani ngesiFrentshi?
Phatha i-'C 'kakhulu into efanayo njengoko uyenzayo ngesiNgesi
Incwadi 'C' ngesiFrentshi ifana kakhulu nendlela esisebenzisa ngayo ngesiNgesi. Ingaba nzima okanye ithambile kuye kuxhomekeke kwiileta ezilandelayo, ingaba negama, kwaye ukuguqulelwa kwegama kukutshintsha xa kuhlanganiswe nezinye iileta.
Esi sifundo esisisiseko sesiFrentshi siya kukuhamba ngeendlela ezahlukeneyo zokubhengeza incwadi 'C.' Kukho imizekelo embalwa ukuqhuba ngendlela.
Indlela yokubiza 'C' ngesiFrentshi
Incwadi 'C' ininzi 'C' ngesiNgesi.
Isandi siya kutshintsha kuxhomekeke ekubeni kulandelwa yimbi okanye ithoyile .
IsiFrentshi 'C' singachazwa ngeendlela ezimbini:
Ukubiza okulula - Ngaphambi kwe-'E, '' Mina, 'okanye' Y, '' iC 'ibizwa ngokuthi' S ': phulaphula.
Ukubiza okunamandla - Ngaphambi kwe-'A, '' O, '' U, 'okanye i-consonant,' C 'ichazwa njenge' K ': mamela.
Xa i-'C 'ihamba phambi kwesibonakaliso esinzima kodwa kufuneka sichazwe njenge- 'C ,' i- accent cédille - ç - yongezwa ukuba yenze ithambile. Ngaloo ndlela, 'ç' ayifumaneki phambi kwe-'E 'okanye' I 'ngenxa yokuba ezo zilwimi ezilula.
Amazwi aseFrentshi athi 'C'
Ngaloo ntsingiselo, makhe senze amagama ambalwa 'C' ngesiFrentshi. Ukunikezelwa oko ufunda nje, zama ukubiza ngalinye la magama ngokwakho. Emva koko, khangela ukuba uyenze njani ngokuchofoza igama kwaye ulalele ukubiza kakuhle.
Qalisa ngokusebenzisa lo msebenzi ngokubanzi njengoko ufuna ukuba uphumelele izandi zakho 'C' kwaye wandise isigama sakho.
ça va? (unjani?)
caleçon (zangaphantsi kwamadoda)
Iincwadi zokudibana kunye ne 'C'
Incwadi 'C' isetyenziselwa kubambiswano oluqhelekileyo kunye nesandi 'C' siya kutshintsha. Njengoko ufunda ngakumbi isiFrentshi, uza kufumana ezi ziqhelo, ngoko kulungile ukuzenza.
CH - Ivakaliswe njengesiNgesi 'SH' okanye i-'K. '
I-SC - Ngaphambi kwesibhenqo esithambileyo, ivakala ngathi 'S.' Ngaphambi kwesibonakaliso esinzima okanye i-consonant, i-'S ' kunye ne' C 'ichazwa ngokwahlukileyo kwaye ngokwemiqathango yabo.
Nje ngezesayensi (isayensi) okanye i- escargots ( iiski ).
I-XC - Ngaphambi kwevolumu elithambileyo, kuzwaka ngathi [ ks ] okanye 'X.' Ngaphambi kwesibonakaliso esinzima okanye i-consonant, i-'X 'kunye ne' C 'ibhengezwa ngokwawo kwaye ngokwemiqathango yabo yemveli.
Njenge- excentre (ngaphandle) okanye uvakalise (espresso).
I-Trabalenguas (iilwimi zesiTshayane iilwimi)
Indlela yokubiza 'i-UN' ngesiFrentshi
I-Hamilton College ye-GPA, iSAT kunye ne-ACT Data
Intetho yeKaku ngesiJapane